नेकपा (एस)बाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंगियो, उपप्रधानमन्त्री कसले पाए ? « Ok Janata Newsportal
नेकपा (एस)बाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंगियो, उपप्रधानमन्त्री कसले पाए ?
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ ।
नेकपा एसले उपसभामुखदेखि मन्त्रीको अन्तिम तयारी गरेको हो । यसपाली सरकारमा जाने सबैजसो अनुहार नयाँ रहने नेकपा एस स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री बन्नका लागि तछाडमछाड हुने देखिएपछि नयाँलाई अवसर दिने राणनीति शुरु गरिएको हो ।
देउवा सरकारमा नेकपा एसले ६ मन्त्री पाउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा रिक्त रहेको उपसभामुख पद पनि सोही दलले पाउने सहमति भएको छ ।
हालसम्म मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएका नाममध्ये विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, डा. खिमलाल देवकोटा, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, निरुदेवी जैरु अग्रपंक्तिमा छन् । यीमध्ये एक जनालाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । त्यस्तै मन्त्रीकै रुपमा सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाबाट शेरबहादुर कुवँरको नाम पनि चर्चामा रहेको छ ।
तर, उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन । उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने गरी नेता डा. वेदुराम भुसालको नाम चर्चामा छ । नयाँ दलको प्रमाणपत्र लिएपछि संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय सभा दलको नेता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक गरी ६ जना सांसदले विभिन्न जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
यसरी एकीकृत समाजवादीले सरकारमा ६, संसदीय जिम्मेवारीमा ६ र उपसभामुख एक गरी १३ सांसदलाई नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने भएको छ ।
त्यसमध्ये संसदीय दलको नेतामा माधवकुमार नेपाल यसअघि नै चयन भइसकेका छन् । यसबाहेक विभिन्न संसदीय समितिका सभापति हेरफेर हुँदा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा तीनवटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सम्भावना छ ।